RASMI: Tababaraha Ku Guulaystay Abaal Marinta Maamulka Premier League Ee Macalinkii Xili Ciyaareedka Horyaalka Ingiriiska Ugu Fiicnaa Oo Lagu Dhawaaqay. - Gool24.Net
RASMI: Tababaraha Ku Guulaystay Abaal Marinta Maamulka Premier League Ee Macalinkii Xili Ciyaareedka Horyaalka Ingiriiska Ugu Fiicnaa Oo Lagu Dhawaaqay.
August 15, 2020 Mahamoud Batalaale
Waxaa hadda si rasmi ah loogu dhawaaqay tababaraha ku guulaystay abaal marinta macalinkii xili ciyaareedka ee horyaalka Premier league ugu fiicnaa.
Maamulka horyaalka Premier League ayaa ku dhawaaqay in Jurgen Klopp uu ku guulaystay abaal marinta tababarihii xili ciyaareedka dhamaaday ugu fiicnaa kadib markii uu ka guulaystay musharixiintii la tartamayay.
Jurgen Klopp ayaa kooxdiisa Liverpool ku hogaamiyay koobka Premier league oo ay 30 sanadood sugayeen laakiin waxaa layaab noqotay qaabkii uu dhibcaha badan ugu garaacay kooxihii ay koobkan ku tartamayeen.
Jürgen Klopp ayaa loo doortay macalinkii xili ciyaareedka dhamaaday ee horyaalka Premier League ugu fiicnaa wuxuuna ku biiray da’yarkiisa Arnold oo isna shalay ku guulaystay abaal marinta da’yarkii xili ciayareedka Premier League ugu fiicnaa.
Jurgen Klopp waxa uu abaal marinta maamulka Premier league ee tababarihii xili ciyaareedka ugu fiicnaa uu ku garaacay Frank Lampard oo Chelsea shaqo fiican u soo qabtay, Brendan Rodgers oo xili ciyaareed cajiib ah la soo qaatay kooxda Leicester City iyo tababaraha kooxda Sheffield United heerka kala gaadhsiiyay ee Chris Wilder.
Maamulka Premier League ayaa Jurgen Klopp ugu hambalyeeyay abaal marinta ay bixiyaan ee tababaraha xili ciyaareedka horyaalka Ingiriiska ugu fiican waxaana muuqaalka hoose la soo raaciyay: “Hambalyo Jurgen Klopp. Tababaraha Liverpool waa guulaystaha tababaraha xilic iayareedka 2019/2020 ee Barclaysfooty”.
Jurgen Klopp waxa uu dhawaan ku soo guulaystay abaal marinta tababaraha sanadka ee ay bixiyaan ururka tababarayaasha kubbada cagta England ee Sir Alex Ferguson loogu magac daray taas oo uu ka gudoomay isla Sir Alex oo lagu sharfay in uu Klopp abaal marintan siiyo.
Liverpool ayaa iyaduna jamaahiirta kooxdeeda la wadaagtay in Jurgen Klopp uu ku guulaystay abaal marinta macalinkii ugu fiicnaa waxayna twitterka ku soo qoreen: “Jurgen Kllopp waxaa loo magacaabay tababaraha Premier League ugu fiican ee Manger of the Season 2019/2020”
Jurgen Klopp ayaa haddaba ka fikiraya xili ciyaareedka cusub iyo qaabkii ay kooxdiisa Reds u sii difaacan lahayd koobka Premier League iyada oo la ogyahay in dhamaan kooxaha waa wayni ay dagaal ku jiraan.